Tarsan: Gabrow wadankan dembiilaa ka tahay, dadka aad leysay waxaa ku jira walaalkey, da’dii iga wayneyd” – idalenews.com
Tarsan: Gabrow wadankan dembiilaa ka tahay, dadka aad leysay waxaa ku jira walaalkey, da’dii iga wayneyd”
Muqdisho(INO)-Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, Gudoomiyaha Xisbiga Cadaaladda & Bulshada, ayaa si kulul u weeraray General Gabre oo ka tirsan Saraakiisha Itoobiya ee ku sugan Somaliya.
Maxamuud Axmed Nuur, ayaa marka hore bulshada ku dhaqan Gobolada Shabellaha Dhexe & Hiiraan ugu baaqay inaanay marnaba ogolaanin in maamul uu u sameeyo Gabre.
“Waxaan leenahay reer Hiiraan iyo reer Shabellada Dhexow ha ogolaanina inuu Gabre idin dhiso maamul. Dowladiinii way idin fashilisay, dib u dhac bay idinku samaysay, umadda inaad ka dambeysiin bay idin keentay, way idin quursatay, wayna idin texgelin weyday. Ha ogolaanina, ha u istaagina, hana u shirina Gabre iyo wax la socdo iyo wax la caalamaala.” Ayuu yiri Gudoomiyaha Xisbiga Cadaaladda & Bulshada.
Waxaa uu sheegay in uu yahay musharax u taagan jegada madaxtinimada ee dalka, haddii uu ku soo baxana uu dalka ka mamnuuci doono General Gabre.
“Anigu murashax baan ahay haddaan Madaxweyne noqdo, maalintaasaa ugu dambeyso wadanka inuu soo galo. Gabre wadankan Walaahi buu-san soo galeynin.” Ayuu yiri Maxamuud Axmed Nuur.
Sidoo kale waxaa uu ka dhawaajiyay in Gabre uu Somaliya ka yahay dembiile, markii uu dad ku laayay. Dadka uu ku laayayna waxaa uu Tarsan sheegay inuu ku jiray walaalkii, da’dii ka wayneyd.
“Gabrow wadankan dembiilaa ka tahay, dadkaad leysay waxaa ku jira walaalkey, da’dii iga wayneyd. Bilaa micnaa u dishay, markaasaa rabtaa inaad hadana magaaladii ila dhex joogtit.” Ayuu yiri siyaasiga cod karka ah.
Markale waxaa uu yiri “Kuma soo noqoneysid wadankan, anigu haddaan Madaxweyne ka noqdo. Adigu iyo dalkaagaba haddii Madaxweynenimadeeda idinku xiran tahay, Ilaahayow weligeed ha’iga dhigin.”
Tarsan, ayaa dadka Soomaaliyeed ugu yeeray inaanay iska qaadin karaamada uu Alle siiyay, isla-markaana ay ilaashadaan sharafka iyo karaamadooduba.
“Umadda Soomaaliyeed kaaramada yaanan iska qaadin, karaamadeena iyo sharafkeena aan ceshano. Anagaa iska leh awoodda waxa dhismaaya, anagaa dhisanayna, yaan la’idin sheekaynin.” Ayuu yiri Tarsan.
Sidoo kale wuxuu si adag uu Madaxda Qaranka ugu dhaliilay in ay horboodayaan Gabre, laakiin ay taasi meel ka dhac ku tahay umadda Soomaaliyeed.
“Dowladdu waa fashilantay, way ku ceebeysan tahay, nagamana horimaan karto, wejigey daboolanaysaa markay noo soo dirtay Gabre. Caay bay nagu tahay in Gabre loo soo diro labada gobol.” Ayuu yiri Duqii hore ee Magaalada Muqdisho.
Tarsan, ayaa yiri “Gabre awoodda uu sheeganaayo asagaa samaystay ee malaha, qolo uu ka wato ma jirto. Wasiirkii, Ra’iisal Wasaarihii iyo Madaxweynihii baa u boodaaya.”
Ugu dambeen waxaa uu Dowladda Itoobiya uu u soo jeediyay inay cadeyso, haddii uu wakiil u yahay Gabre iyo haddii kalaba, isagoo intaa ku daray in joogitaankiisa Somaliya ay aflagaado ku tahay Xukuumadda Addis Ababa.
“Dowladda Itoobiya hadduu wakiil u yahay ha sheegto. Waxaan leenahay Dowladda Itoobiya, Gabre inuu metelo caay bay idinku tahay. Gabre ka saara wadanka.” Waxaa sidaasi yiri Tarsan.
Tarsan, ayaa hadalkan ka sheegay kulan Khamiistii ka dhacay Magaalada Muqdisho, oo ay ka qaybgaleen siyaasiyiin iyo xildhibaano, loogana soo horjeeday sida ay Xukuumadda Muqdisho u abaareyso dhismaha Maamulka Gobolada Hiiraan & Shabellaha Dhexe.
Faallo: Maxaa u Dambeeyay Soomaaliya?
Daawo:Bannaanbax wayn oo maanta ruxay Caasimadda Venezuela